လှဒါနီ ပြောချင်သေးတယ် | Save Burma
အာဏာရှင်စနစ် ကျဆုံးမှ တတိုင်းပြည်လုံး စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီကို ခံစားရမယ် လှဒါနီ ပြောချင်သေးတယ်
သောကြာနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ 23 2009 19:08 – မြန်မာစံတော်ချိန်
”ခင်ခင်ရဲ့ မာလာပန်းလွှာမှာ၊ ရွှေတံချူနဲ့ ချူပုံဆန်းတာ၊ ပျို့အသည်းကျွမ်းလောက်စရာ၊ မောင့်မေတ္တာရေဖျန်းတာ”
ဒေါ်မေရှင်နှယ့်ရှင်၊ နားရှက်စရာ ဒီလိုသီချင်းတွေ ဘယ့်နှယ့်ကြောင့်များ ဆိုသွားတာပါလိမ့်။ ဒါနဲ့များ သူ့ကို ဣနြေ္ဒရှင်လေးဘာလေးနဲ့ ၀ိုင်းချီးမွမ်းနေကြတဲ့ လူတွေများ ခက်ပါဘိ။
ဟဲဟဲ့အဲဒီလိုများ ဆိုလိုက်ရင် ဟဟ… ဒီမိန်းမက တော်တော်ကို လျှာသရမ်းပါလား။ အုတ်ဂူထဲက အနုပညာရှင်ကြီးကိုတောင်မှ သွားပုပ်လေလွင့် ပြောနေတယ်လို့ အောက်မေ့ကြပါလိမ့်မယ်။ မဟုတ်ပါဘူးရှင်။ အကြောင်းက ဒီလိုပါ။ မေရှင်နဲ့ ပြည်လှဖေကြီးတို့ ဆိုကြတဲ့ ဂန္ထ၀င်အချစ်သီချင်း ‘ချစ်ဗျူဟာ’ ကို ညစ်ညမ်းတယ်လို့ ဆိုနေကြလို့ပါ။
မြန်မာပြည်က ဂျာနယ်လစ်တွေက ဟစ်ဟော့အဆိုတော် ဂျောက်ဂျက်ရဲ့ သီချင်းတွေကို ညစ်ညမ်းတယ်ဆိုပြီး ဝေဖန်မိလို့တဲ့ရှင့်။ အဲဒါကို အနောက်ကျွန်းကြီးမှာ ပညာတော်သင်နေတဲ့ တော်လှန်ရေးသမား သတင်းစာဆရာကြီးက ကလေးတွေကို လွတ်လပ်ခွင့်ပေးကြပါ၊ ဒါ ဒီမိုကရေစီပဲ၊ ဒါမျိုးမကြိုက်ရင် ဖဲမွေ့ယာသီချင်းတွေ နားထောင် ဆိုလို့ပါ။ရိုင်းလို့ ရိုင်းတယ် ပြောမိတာပဲရှင်။ ကျမတို့ကို ရှေးရိုးစွဲ၊ အာဏာရှင်နောက်မြီးဆွဲ၊ အန်တီ (anti-) ဒီမိုခွတုပ်၊ ဗုဒ္ဓမျိုးချစ် (Buddhist Nationalist) ဘွဲ့တွေကို စုံနေတာပဲ နှင်းလိုက်ကြတာ။
ပြောလို့ပြောတာ မဟုတ်ဘူးရှင့်။ ကျမတို့ တော်လှန်ရေးသမားကြီးတွေက သိပ်ချစ်စရာကောင်းတာ။ ဇတ်ဇတ်ကြဲတွေ။ မထင်ရင် မထင်သလို စကားလုံးကြီးတွေနဲ့ လူတွေကို အသေဆော်တော့တာ။
မြင်မြင်ရာကို သူတို့သိတဲ့ နိုင်ငံရေးပုံစံခွက်ကြီးထဲ ထည့်ဖျော်တော့တာပဲ။ ပုံးရည်ကြီးမစ်ရှိတ်ပေါ့ရှင်။ ချော့ကလက်နဲ့ ကာလာမတူဘူးလား။
ကျမလား? ။ ဘာမော်ကွန်းဝင်မှ မဟုတ်ရပေါင်ရှင်။ ဗမာဘုရင်ခေတ်ကတည်းက ခုထက်ထိ ကောင်းစား၊ အဲလေ ဟုတ်ပါဘူး။ နာမည်တလုံးနဲ့နေတဲ့ မျက်နှာကြီးမျိုးရိုးထဲကပေါ့။ ကျမတို့ ဦးလေးဦးကြီးတွေထဲမှာ အနီးနေ အဝေးရောက် သူပုန်သူကန်တွေလည်းပါ၊ ၀န်ကြီးမှူးကြီး၊ တံတိုင်းကြီးတွေလည်း ပေါသပ။ ကျမကတော့ အားလုံးကို အမျိုးလိုပဲ အောက်မေ့ပါတယ်။ ရတဲ့ဘက်က လှည့်အခွင့်အရေးယူ… ဟုတ်သေးဘူး။ ဒီလိုပဲ နားလည် သည်းခံရတာပေါ့ရှင့်။ ဆွေဆွေမျိုးမျိုးဆိုတာ ပြတ်စကောင်းတာမှ မဟုတ်ဘဲ။
ကျမတို့လည်း တိုင်းပြည်ချစ်တတ်တာပေါ့ ရှင့်။ ဒေါ်လာ မစားဘဲ ချစ်ပြစမ်းပရစေလား။ တကယ်ပါ အဟုတ်ဘုရားရှူး။
တိုင်းပြည်အတွက်လည်း နိုင်သလောက်လုပ်ပါတယ်ရှင်။ မနိုင်တော့လည်း ချထားလိုက်တာပေါ့။ ဟုတ်ဘူးလား။ အပြင်ကနေ အာပြဲ လျှာပြဲနဲ့ အော်နေတဲ့ ကိုယ်တော်မြတ်တွေကော ဘာများအားကိုးရလို့တုံး။ အနှစ် ၂၀ကျော်မှတော့ မောင်ဘုန်းတို့ ကို သဇင်ဂမုန်းက မမျှော်တော့ပါဘူးရှင်။
သူများတွေလိုလည်း ကမ္ဘာလှည့် တင်တင်စိန် မလုပ်ဖူးပါဘူး။ ယေးလ်နဲ့ ထားဝယ် သွားဖို့ ဝေး၊ ကားမစီးနိုင်လို့် မန်းရွှေမြို့ကြီးကိုတောင် မရောက်တာ ကြာပြီရော။ ဒီတော့ ကျမ သိတဲ့ ဖြုတ်ဦးနှောက်လေးနဲ့ပဲ အစီရင်ခံပါရစေ။
ကျမတို့သိတဲ့ သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်ဆိုတာ ပြည်ကြီးပုခုံး၊ ပြည်ကြီးမျက်လုံးဆိုတဲ့ လူထုဦးစိန်ဝင်း ပြောတာမျိုးလို့ပဲ အောက်မေ့တာပါ။ တိုင်းပြည်မှာ မတော်မတဲ့တာတွေ့ရင် ပဲ့ပြင်ဝေဖန်ပေးဖို့ မဟုတ်ဘူးလားရှင့်။
ဒီတော့ လူတွေပြောနေကြတဲ့ Biweekly ထဲက ဆောင်းပါးဆိုတာ ရှာဖတ်ကြည့်ပါတယ်။ သူတို့ကတော့ နားရှက်စရာ ဖရုဿဝါစာတွေကို သီချင်းလုပ်ဆိုနေတဲ့အတွက် လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေ ရှိတယ်ဆိုတာ၊ ဒီလို သီချင်းတွေကို သီဆိုရောင်းချထွက်ဆိုတဲ့ သူတွေကို ဘယ်လိုဥပဒေနဲ့ အရေးယူလို့ရတယ်ဆိုတာ ရေးထားတာပါပဲ။
အာဏာပိုင်နဲ့ အဆိုတော်လေးတွေကို ဘာမှ လှည့်တိုက်ပေးတာမျိုးတွေကို မတွေ့မိပေါင်ရှင်။ ဒါပေသိ ဥပဒေ ဥပဒက်စကားတွေ တွေ့ရတော့ ယားကျိကျိတော့ နိုင်သပေါ့။ ဖြစ်ကတတ်ဆန်း တိုင်းပြည်ကြီးမှာ ဥပဒေကို မျှော့ကြိုးလို လိုရာဆွဲပြီး တစ်တီတူး တရားရှင်ကြီးတွေက စစ်မှာလောက်တော့ မြန်မာတွေက ရီတာပေါ့ရှင်။
ရေးသင့်တာက ဒီလိုသီချင်းမျိုးကို ကလေးတွေကြားအောင် မဖွင့်ကြနဲ့။ အလှူမင်္ဂလာဆောင်မှာ အော်လံနဲ့ မလွှင့်နဲ့။ နားကျပ်နဲ့ နားထောင်ကြပေါ့။ ဘကြီးနုခေတ်က အမဲသားကို တိုးတိုးသား ခေါ်သလို တိုးတိုးသီချင်းပေါ့။ အခုခေတ် နိုင်ငံရေးသီချင်း နားထောင်သလို၊ ဟုတ်လား။
ဒီလို ဂျာနယ်ထဲထုတ်ရေးရတယ်ဆိုကတည်းက တော်တော့ကို ခွေးလှေးပျားတော ပျံ့နေလွန်းလို့ နေမှာပါ။ အစိုးရကိုယ်နှိုက်က သိသိကြီးနဲ့ လူတွေကို ကာမလမ်းလွှဲလုပ်ပေးထားတယ်လို့ မြင်တယ်ရှင့်။ ကလေးလေးတွေ ပညာရစေဖို့ အမိအဖရဲ့ ပုံသွင်ပေါ့ရှင်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများရဲ့ ရွှေမေတ္တာ။
စစ်ဗိုလ်တွေက တိုင်းပြည်ကို ဒီလို ဖျက်နေကြတာကို အပြင်က ဒီမိုကရေစီ ကြက်ဖကြီးများကလည်း လွတ်လပ်စွာ ဖော်ပြခွင့်တွေ၊ ပိတ်ပင်မှု အလိုမရှိတွေနဲ့ မီးလောင်ရာ gas အိုးဖွင့်လုပ်နေကြသေး။ မေးစမ်းပါရစေ၊ စကားမစပ်။ ရှင်တို့ အမေဒိကန်ပြည်၊ ဘိလပ်ပြည်တွေမှာကော လုံးဝဥဿုံ လွတ်လပ်ခွင့်ရှိတယ်လို့ အာမခံသလားတော့။ ရှင်တို့တိုင်းပြည်မှာ ကွန်မြူနစ်အကြောင်း၊ ဖက်ဆစ်ကောင်းကြောင်း မီဒီယာတွေမှာ ထည့်ရဲလို့လား။ အရင်းရှင်ကြီးတွေနဲ့ ပြည်သူ့လွတ်လပ်ခွင့် သမားတွေအကြား လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၄၀ မာတင်လူသာကင်းတို့ခေတ်ထိ ဘယ်လိုတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာ မေ့မပစ်လိုက်ကြပါနဲ့အုံး။
လွတ်လပ်စွာ ကွဲလွဲခွင့်ကို ယုံကြည်ပေမယ့် လွတ်လပ်စွာ ဖော်ထုတ်ခွင့်ဆိုပြီး လမ်းပေါ် ချွတ်သွားနေရင် မခက်ဘူးလား။ အကြွင်းမဲ့ လွတ်လပ်မှုဆိုတာ ဘယ်တိုင်းပြည်မှ မရှိပါဘူး။
ဒီလိုပဲ သူတို့တိုင်းပြည်တွေမှာ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု အထိန်းအကွပ်တွေ ခေတ်ပြောင်းလာတာနဲ့အမျှ ဘယ်လိုပြောင်းလဲ ပျက်စီးကုန်တယ်ဆိုတာ ရောက်ဖူးပေါက်ဖူးတဲ့ ဗမာတွေ ဟိုရှေးကတည်းက ရေးခဲ့ပြီးသားပဲ။
ကျမတို့ အမျိုးသားတိုင်းပြည်ကြီးမှာ အခုမှ လှည်းခေတ်လှေခေတ်၊ သက်ဦးဆံပိုင်ခေတ်ပါရှင်။ နေပြည်တော်မှာ ရာဇဌာနီလမ်းမကြီးနဲ့ ဆိုသဟာမျိုးပေါ့်။ ဒီမိုကရေစီတို့၊ လူ့အခွင့်အရေးတို့ဆိုတာ ရေဒီယိုထဲမှာသာ ရှိတာပါ။ ဆေးစာရှိရာ ဖတ်ပါလေ။ ရောဂါပျောက်နိုးနိုးဆိုတာမျိုး မင်းလောင်း မျှော်တာနဲ့ပဲ မိုးကြီးချုပ်လှပါပြီ။ ဒီလို ခေတ်နောက်ကျတဲ့ တိုင်းပြည်ကို အနောက်ဖော်နည်းကားတွေနဲ့အတင်းဇိကုပ်ပြီးနတ်ပြည်ပို့ ဖို့ ကြံနေကြတာ မခက်ဘူးလား။
တတိုင်းပြည်လုံး အဘက်ဘက်က ဆုတ်ယုတ်တဲ့အချိန်မှာ ပညာရေးနဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုတာကကော ဘာများ စွမ်းလို့လဲ။ အရင်ဆုံး ကျဆုံးတာပေါ့။ အနာဂတ်လမ်းပိတ်ပြီး ထွက်ပေါက်မဲ့နေတဲ့ ကလေးတွေရဲ့ အစာမကြေတာဟူသရွေ့ ကို ဂီတမှာ လာပေါက်ကွဲ၊ အများပြည်သူ အကြားမတော်တဲ့ သီချင်းတွေက ကလေးပေါက်စနတွေ ပါးစပ်ထဲရောက်။ ဒါတွေကိုသာ ဆက်ပြီး သာယာနေရင်၊ လျစ်လျှူရှုထားရင် မြန်မာပြည်နဲ့ လူမျိုးဆိုတာ အလေ့ကျပေါက်ပန်းတွေလိုပဲ ထင်ရာစိုင်းတွေ ဖြစ်ကုန်မှာပေါ့။ အရည်အသွေးရှိတဲ့ ကျောက်ရိုင်းလေးတွေလည်း ဂဲလုံးဖြစ်ကုန်မပေါ့။
ကျမလို ကလေးအမေ အအိုတောင်မှ နားမုဒိမ်းကျင့်ခံနေရတာ၊ အပျိုရွယ်လေးတွေဆို ဘယ့်နှယ့် လုပ်ပ။ ရှင်တို့ လို ရှစ်စပ်က ဂျင်ဂျင်လည်နေတဲ့ ယောင်္ကျားကြီးနားနဲ့ပဲ အရာရာကို မကြည့်နဲ့ ရှင့်။ သတင်းသမားဆိုတာ ဘက်စုံဒေါင့်စုံအောင် မြင်တတ်မှပေါ့။
သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း ကစလို့ ခေတ်အဆက်ဆက် မြန်မာဂျာနယ်လစ်တွေဟာ မကောင်းရင်ဖယ်၊ ကောင်းရင်တွယ် ဆိုတဲ့ မူနဲ့ပဲ တိုင်းပြည်အတွက် ပေးဆပ်သွားကြလို့ တိုင်းပြည်ပြု ပုဂ္ဂိုလ်စာရင်းဝင်ကြတာပေါ့။ ရှင်တို့လိုသာ နားမထောင်ချင်ရင် ပိတ်ထားပေါ့ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးနဲ့သာဆိုရင် မြန်မာပြည်ဟာ ဗိုလ်ချုပ်ပြောတဲ့ တိုင်းပြည်ကြီး ဟို အရင် အနှစ်ငါးဆယ်တုန်းကတည်းက ဖြစ်နေမှာပေါ့။ ဒီသီချင်းတွေ နားထောင်ရင်း သွားလေသူ မေမေမာကြီး(လူထုဒေါ်အမာ) ကို အောက်မေ့လိုက်တာ။ သူ ရှိစေချင်စမ်းပါဘိ။ ရှင်တို့သီချင်းတွေများကြားရင် ဒေါ်အမာတောင် သေရွာက ပြန်ထလာလောက်ပါရဲ့။
ကျမတို့ကို အမြင်ကျဉ်းရှေးရိုးစွဲဆိုတော့ ရှင်တို့က ဇီးကွက်မျက်ပြူးတွေမို့လို့လား။ လာလာချေသေး။ ဒီဗုဒ္ဓမျိုးချစ်ဝါဒကြောင့် ရှင်တို့ ကျွန်တွင်းက လွတ်တာပေါ့။ မဟုတ်ရင် ရှင်တို့ တတွေ ချစ်တီးအဖေ ခေါ်နေရတာကြာပြီ မှတ်။ မလေးမှာ တရုတ်တွေ အုပ်စီးထားသလိုပေါ့။ အခု တရုတ်ကြီးကို မီးဖုတ်နေရတဲ့ စစ်အစိုးရကိုများ မျိုးချစ်တွေလို့ လူတွေက ထင်နေ မှတ်သလား။
ကျမတို့လည်း ငယ်ရာက ကြီးလာတာပါ။ ဂီတနဲ့ လူငယ်ဆိုတာ ခေတ်ရဲ့ ပုံရိပ်တွေမှန်း သိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ညစ်ညမ်းဂီတ အလဇ္ဇီ ဒုဿီလ ကာမရာဂကို စပယ်ရှယ်ဆွတဲ့ ဟာမျိုးကိုတော့ လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတဲ့ ဆေးသကြားအုပ်ပြီး မသိကျိုးကျွံ မလုပ်သင့်ဘူးရှင်။ မဖြစ်သင့်တာတွေပါ။
သိုးဆောင်းပြည်မှာ အနေကြာတော့၊ အင်းလေ ဌာနီပြည်ကြီးကလည်း ဝေးသကိုး။ ရှင်တို့ရေးတဲ့ စာကို ဖတ်ပြီး လူငယ်တွေမှာ ဟီရိသြတပ္ပဆိုတာ ဘာမှန်း သိလာရအောင် ရေးနိုင်တယ်ဆိုရင် ရှင်တို့ပုံကို ဘောင်သွင်းပြီး ကျမ ကန်တော့ပါ့မယ်။ ဘယ့်နှယ့်တော် ပြည်တွင်းက ဂျာနယ်လစ်တွေမှာ ရတဲ့နည်းနဲ့ မတော်တာကို မတော်မှန်း၊ မှားတာကို မှားမှန်း ပြောတာပဲ။ ရှင်တို့က သူတို့ကို နေပြည်တော်နဲ့ ပေးစားတယ်။
ဒီသီချင်းဆိုးတွေကြောင့် အစကတည်းက လူငယ်တွေ ရဲ့ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတွေအပေါ် မနှစ်မြို့တဲ့ ရှေးရိုးစွဲတွေ၊ နအဖ အလိုတော်ရိတွေက ၀မ်းပန်းတသာနဲ့ မြေစမ်းခရမ်းပျိုး ယဉ်ကျေးမှုသစ်တွေကို ဖျက်ချိုးပိတ်ဆို့ကြလိမ့်မယ်။ ရှင်တို့က အဲဒီလို အားပေးအားမြှောက်လုပ်ရင် ကလေးတွေကို ပုဆိန်ရိုးလို့ သမုတ်ကြပါလိမ့်မယ်။
စာလည်းရှည်ပြီ။ စာရိတ္တမဏ္ဍိုင်ကြံ့ခိုင်စေရမည်ဆိုပြီး ကြုံးဝါးခဲ့တဲ့ ရှေးက ဂျာနယ်လစ် လက်ဟောင်းအဖိုးတန်ကြီးတွေကိုပဲ လွမ်းရပါသရှင့်။
(မြန်မာ မျိုးချစ် ဒီမိုကရက်စစ်စစ်)
(အယ်ဒီတာမှတ်ချက်။ ။ စာရေးသူသည် သတင်းထောက်တဦးဖြစ်သည်။)
မှတ်ချက်၊ မဇ္ဈိမသို့ ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုရန် ခက်ခဲသူများအတွက် အပြည့်အစုံ ပြန်လည် ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ Like this:Like Loading...
Written by Lwin Aung Soe January 23, 2009 at 2:26 pm
Posted in မဇ္ဈိမ, မှတ်သားစရာ
Tagged with လှဒါနီ	« World focus on Burma (22 January 2009)
World focus on Burma (23 January 2009) »
Mizzima (Burmese)၂၀၁၇-၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၌ ဘတ်ဂျက်ငွေ ကျပ် ၄၂၂ ဘီလျံသုံးစွဲရန် လျာထား December 6, 2016အသက်၁၉နှစ်အရွယ်၌ မုဒိမ်းကျင့်ခံရအပြီး စိတ်ကစဉ့်ကလျားရောဂါခံစားခဲ့ကြောင်း လေဒီဂါဂါဖွင့်ဟပြောဆိုခဲ့ December 6, 2016ဘရာဇီး အထက်လွှတ်တော်ခေါင်းဆောင် လာဘ်စားမှုကြောင့် ရာထူးမှ နှုတ်ထွက်ရန် အမိန့်ပေးခံရ December 6, 2016"ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် တတ်မြောက်ထားတဲ့ လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်တွေ လိုပါတယ်" December 6, 2016လုံခြုံရေးကောင်စီ၏ အလီပိုမြို့ ခုနစ်ရက်တာ အပစ်ရပ်ရေး ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရုရှနှင့် တရုတ် ဗီဒိုအာဏာသုံး ပယ်ချ December 6, 2016အိန္ဒိယနိုင်ငံရေးသမား ဂျေ ဂျာရာလာလီသာ အသက်၆၈အရွယ်၌ကွယ်လွန် December 6, 2016ဒူးဒဏ်ရာကြောင့် ဘိုလာဆီ ရာသီကုန်ထိ အနားယူရတော့မည် December 6, 2016ဘိုင်ယန်သို့ မပြောင်းမီ မန်ယူသို့ပြောင်းရန် အလွန်နီးစပ်ခဲ့ဟု ဟွမ်မဲလ်ဖွင့်ဟ December 6, 2016 VOA (မြန်မာ)An error has occurred; the feed is probably down. Try again later. စည်းလုံးခြင်းရဲ့အင်အားAn error has occurred; the feed is probably down. Try again later.လူထုအသံ	RFA (Burmese)မစ္စတာကိုဖီအာနန် ကော်မရှင်နဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၅ ဦး တွေ့ဆုံဥယျာဉ်ခြံမြေတွေမှာ စက်မှုဇုန် အကောင်ထည်မဖော်ဖို့ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံထံ စာပို့တောင်းဆိုသမ္မတ ဦးထင်ကျော်နဲ့ ရခိုင်ကော်မရှင် တွေ့ဆုံရခိုင်ပဋိပက္ခ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ဖြေရှင်းဖို့ မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ် တောင်းဆို မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကို ရန်ကုန်မြို့မှာ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမွန်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ တနင်္သာရီတိုင်း လွှတ်တော်အကြီးအကဲတွေ ကို ခေါ်ယူစစ်ဆေးမည် Burma Digest InfoAn error has occurred; the feed is probably down. Try again later. Mizzima (English)14 dead in southern Thai flooding December 6, 2016EU welcomes inquiry commission into recent violence in Rakhine state December 6, 2016Cardinal Charles Maung Bo meets with Rakhine Advisory Commission December 6, 2016Northern Alliance – Burma wants China as peace negotiator December 6, 2016Dozens of Rohingya missing as boat sinks near Bangladesh December 6, 2016Rakhine State Advisory Commission to meet with Government December 5, 2016Thais triumph over Myanmar with Teerasil double December 5, 2016Armed groups renew attacks on military post in N. Myanmar: authorities December 5, 2016 BBC (Burmese)သမ်မတအိုဘားမား ကုလညီလာခံမှာ IS အန်တရာယျ ပွောမွနျ​မာ့​စီးပှား​ရေး​ဖို​ရမျ USကငျြးပပွငျ​သဈ​တဈ​ဦး အသတျ​ခံ​ရ​တာ အတညျ​ပွု RSF AsiaAn error has occurred; the feed is probably down. Try again later. CNN WorldVoters in Italy and Austria send message to EU December 5, 2016Europeans rode an emotional roller coaster Sunday. Up, then down.Italy's PM to resign as referendum fails December 5, 2016Matteo Renzi will offer his resignation as Italian Prime Minister in Rome Monday after sufferingacrushing referendum defeat which could transform the country's political and economic landscape.Far-right rejected in Austria December 5, 2016Anti-immigration candidate Norbert Hofer calls for unity in Austria after an apparent clear loss to independent Alexander Van der Bellen.How populism could shake up Europe December 5, 2016Energized by President-elect Donald Trump's victory, Europe's populist movements are on the cusp of sweeping far-right, nationalist and euroskeptic parties into power across the continent inaseries of upcoming elections.Aleppo girl's Twitter account goes dark December 5, 2016Bana Alabed,a7-year-old Syrian girl who has captured the world's attention with heartbreaking Twitter posts about the bombing of her native Aleppo, postedamessage Monday asking people to pray for her and saying goodbye.Russia and China vote against Aleppo ceasefire December 5, 2016Russia and China on Monday vetoedaUnited Nations Security Council resolution calling foraceasefire in the Syrian city of Aleppo to allow desperately needed aid into the war-ravaged zone.Abe's Pearl Harbor visit will be 'enormous' December 5, 2016Japanese Prime Minister Shinzo Abe announced Monday he will visit Pearl Harbor in late December with President Barack Obama, 75 years after Japan's attack on Hawaii in 1941.Is this the first step to Italy quitting the EU? December 5, 2016Afteraresounding loss at the polls for his constitutional reforms package on Sunday, Italy's Prime Minister Matteo Renzi has announced his intention to resign. IPS Top newsEurope to Decide on Use of Mercury in Dentistry December 6, 2016Nicaraguan Women Push for Access to Land, Not Just on Paper December 5, 2016Soil: Keeping Nutrients in Food and Carbon in the Ground December 5, 2016Leave No One Behind: The Right to Development December 5, 2016Transgender Health December 5, 2016Rethinking trade policy and protectionism in the Trump era December 5, 2016A Deterrent to Regional Development December 5, 2016Trump Needs Lessons in Geopolitics : Musharraf December 5, 2016Meta	Register	Log in